Histoplasmosis (ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Histoplasmosis (ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်)
Histoplasmosis (ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်) ကဘာလဲ။
ငှက်နဲ့လင်းနို့်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့မှိုပိုးတွေကို ရှူမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးခြင်းနှာချေခြင်းတွေကနေကနေ ကူးစက်ပျံ့ပွားနိုင်ပါတယ်။ ငှက်လင်းနို့အညစ်အကြေးတွေရှိနေတဲ့မြေကြီးကေနလည်း ကူးစကနိုင်တာကြောင့် လယ်သမားတွေ၊ မြေကြီးပြုပြင်သူတေမှာ ကူးစက်ခံရနိုငချေများပါတယ်။
ကူးစက်ခံရတဲ့လူအများစုမှာ လက္ခဏာတွေမပြတာကြောင့် ကူးစက်ခံနေရမှ်န်းသိပ်သတိမပြုမိတတ်ပါဘူး။ လူအချို့မှာဆိုရင်တော့ အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်နဲ့ခုခံအားကျဆင်းနေသူတွေမှာ ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးအဆင့်ရောက်နေရင်တောင်မှ ထိရောက်တဲ့ကုသမှုပေးုင်ပါတယ်။
Histoplasmosis (ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Histoplasmosis (ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အမျိုးအစားအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ မပြင်းထန်တဲ့အခြအနေမျာ လက္ခဏာမပြတတ်ပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာတော့ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမျာ ကူးစက်ခံ၇ပြီး ၃ရက်ကနေ၁၇ရက်ထိပေါ်နေလေ့ရှိပါတယ်။
အချို့လုူတွေမှာ အဆစ်နာခြင်းနဲ့အဖုအပိမ့်ထခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အဆုတ်လေခိုခြင်းကဲံသို့ အဆုတ်ရောဂါရှိနေတဲ့လူနာတွေမျာဆိုရင် နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ုနိင်ပါတယ်။ နာတာရှည်ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနဲ့ ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတ်စလေမှာ တီဘီရောဂါနဲ့အလားတူတတ်ပါတယ်။
အဆိုးရွားအပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ ကလေးတွေနဲ့ခုခံအားကျနေသူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပါးစပ်၊ အသည်း၊ ဦးနှောက်အာရုံကြော၊ အရေပြားနဲ့ အဒရီနယ်ဂလင်းတွေအပါအဝင် အနီးမှာရှိတဲ့ခန္ဓါိကုယိအစိတ်အပိုင်းတွေကို ကူးစက်ပျံ့နှံနုငိပါတယ်။ မကုသဘူးဆိုရှ်ု သေစေနိုင်ပါတယ်။
ငှက်လင်းနို့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားပြိးနောက် တုပ်ကွေးလိုလက္ခဏာတွေပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခုခံအားကျဆင်းနေသူတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Histoplasmosis (ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဟစ်တိုပလတ်စ်မာကပ်ဆူလေတမ်လို့ခေါ်တဲ့မှိုပိုးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အညစ်အကြေးနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပျက်စိးသွားတဲ့အခါမှာ အလွန်အမင်းပေါ့ပါးတဲ့မှိုပိုးလေးတွေက လေထဲမှာပျံ့လွင့်လာပါတယ်။ အရင်ကဖြစ်ခဲ့ဖူးမယ်ဆိုရင်တောင် ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အရင်ကထက်ပိုပျော့သွားနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ငှက်လင်းနို့အညစ်အကြေးတွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့ မြေကြီးစိုစိုထိုင်းထိုင်းမှာ ပေါက်ဖွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြက်ခြံ၊ ခိုခြံ၊ စပါးကျီ၊ လှိုဏ်ဂူနဲ့ ပန်းခြံနေရာတွေမှာ အထူးသဖြင့်အဖြစ်များပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက်ကိုမကူးစက်စေနိုင်ပါဘူး။
ဘယ်အရာတွေက Histoplasmosis(ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
လက္ခဏာပေါ်လာနိုင်ချေက ရှူလိုက်မိတဲ့မှိုပိုးအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ မှိုပိုးကူးစက်နိုင်ချေများတာကတော့
ပြင်းထန်ကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးသူများ- အလွန်ငယ်ရွယ်သောကလေးများနဲ့ ခုခံအားကျနေတဲ့အသက်ကြီးသူများမှာ အဆိုးဆုံးအဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခုခံအားကိုကျဆင်းစေတဲ့အခြားအချက်တွေကတော့-
ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးကုသရာမှာ ခန္ဓါကိုယ်ကပြန်ငြင်းပယ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ဆေးများ
Histoplasmosis (ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါအဖြေရှာအတည်ပြုဖို့က ကူုူးစက်ခံရတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ သိပ်မဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေအတွက် မလိုအပ်ပေမယ့် အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင် သင့်တော်တဲ့ကုသမှုပေးနိုင်ဖို့ ရွေးချယ်ရာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။
စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့နည်းတွေက ကန့်သတ်ချက်တွေတော့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အချို့စမ်းသပ်နည်းတွေမှာ အဖြေရဖို့ ခြောက်ပတ်လောက်စောင့်ရပါတယ်။ အောက်ပါနမူနာပစ္စည်းတွေကနေ ရောဂါရှာဖို့ ဆရာဝန်တွေက ပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သုတေသီတွေက ရောဂါအဖြေရှာဖို့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကိရိယာတွေအတွက် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
Histoplasmosis (ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရောဂါမဆိုးသေးဘူးဆိုရင် ကုသမှုပေးဖို့မလိုပါဘူး။ လက္ခဏာတွေကပြင်းထန်နေမယ် ဒါမှမဟုတ် နာတာရှည်ပြန့်ပွားလာမယ်ဆိုရင် မှိုဆန့်ကျင်ဆေးတစ်ခုသို့တစ်ခုထက်ပိုပြီး ကုသမှုပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆေးအချိုက ဆေးလုံးပုံစံနဲ့လာပေမဲ့ အများစုကတော့ အကြောဆေးအနေနဲ့ပေးပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Histoplasmosis (
ဟစ်တိုပလက်စ်မိုးစစ်ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Histoplasmosisကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ကူးစက်ခံရမှုမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ခုခံအားနည်းနေမယ်ဆိုရင် ကူးစက်ပိုးပါတဲ့မြေကြီးနဲ့ ထိတွေ့ရမယ့်အလုပ်မျိုးတွေကို ရှောင်ပါ။ လှိုဏ်ခေါင်းစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနဲ့ ခိုကြက်မွေးခြင်းတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ကူးစက်ပိုးပါတဲ့မြေကြီေးတွကို ဖြန်းခြင်း- ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့မှိုပိုးတွေပါနေတဲ့မြေကြီးမှာ အလုပ်မလုပ်ခင်မတူးဆွခင် ရေနဲ့အနှံ့သေချာဖြန်ေးပးသင့်ပါတယ်။ လေထဲကိုကူးစက်ပိုးတွေ မပျံ့လွင့်အောင် တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ခြံနဲ့စပါးကျီတွေကို သန့်ရှင်ေးရးမလုပ်ခင် ဖြန်းပေးခြင်းကလည်း ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာနှာခေါင်းစည်းအုပ်ခြင်း-မြေကြီးမှာပေါက်ဖွားတဲ့အကောင်တွေကနေ ကာကွယ်ဖို့အေကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ နာခေါင်းစည်းအုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံရမှုကနေ ကာကွယ်ပေးုနိင်ဖို့ ဘယ်လိုအမျိုးအစားနှာခေါင်းစည်းကို ရွေးချယ်ဖို့ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုနဲ့ကျန်းမာရေး အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
1. References : histoplasmosis.
https://www.cdc.gov/fungal/diseases/histoplasmosis/. Accessed 10 Jan 2017.
Accessed 10 Jan 2017.